I-Spring Matress Queen ngamanani aphelele | Rayson
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. I-Spring Matress Queen inikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yesevisi, sesisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi mayelana ne-Product Product Spring Matress Queen noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.Umkhiqizo awunayo imithungo. I-Guige Gunene isethwe ukuqinisekisa ukuthi i-Willle Cless kanye ne-Thrent Tension ilawulwa kahle.